१० वर्षे माओवादी युद्धको औचित्य अझै पुष्टि हुन सकेन : केपी ओली - khabarpatro
‘१० वर्ष देश हिंसामा फस्यो, के का लागि ? कसका विरुद्ध ? के प्राप्तिका लागि भन्न्ने अझै टुंगोमा पुगेको छैन,’ ओलीले भने, ‘गणतन्त्रका लागि थियो भने गणतन्त्र नआई नटुंगियो । २०६३ सालमा त गणतन्त्र त आएको थिएन । गणतन्त्र घोषणा (गणतन्त्र दिन्छु भनेर) गर्ने कसैसँग सम्झौता पनि भएको थिएन । केका लागि थियो ?’
प्रकाशित मिति :आषाढ ७, २०७९ मंगलवार - २२:०९:०५ बजे